Home Wararka Dibada Canan Kaftancioglu: Waa tuma haweeneyda laf dhuun gashay ku noqotay Erdogan?
Siyaasiyaddan caanka ah oo aragtideedu tahay cilmaani oo Turki ah ayaa hadda ka hor lagu xukumay toban sano ku dhawaad xarig ah, waxaana loo haystay “cay iyo borobagaando aragagixiso” oo ay kala hor timid dawladda Turkiga.
Arrin la siyaasadeeyay’
Madaxweyne Erdogan waxay eedeymo uga imaanayeen dalalka reer galbeedka iyo hay’adaha xuquuqul insaanka oo ku eedeeyay in uu caburin ku hayo garsoorka iyo hay’adaha kale ee dowladda kadib afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalkaas sanadkii 2016-kii.
Kadib markii racfaan ka qaadatay go’aanka maxkmaadda waxaa la dhimay xukunkii xarigga ahaa, waxaa looga dhigay wax ka yar shan sano oo xarig ah.
Kaftancioglu ayaa lagu eedeeyay 10 sano ka hor inay “aflagaadeysay” madaxweyne Erdogan iyo dawladda Turkiga ee iyo sidoo kale la sheegay inay ku lug laheyd “faafinta dacaayadaha argagixisada”.
Erdogan oo tan iyo 2003-dii soo ahaa Ra’iisul wasaaraha ama madaxweynaha Turkiga, ayaa qudhiisa sheegay in ‘qofkii ku guulaysta Istanbul uu ku guuleystay doorashada Turkiga’.
Previous articleCuntooyinka mustaqbalka: Cuntooyinka la isticmaali doono marka la gaaro sanadka 2050
Next articleXog: FAHAD YAASIIN oo ka dhoofay Muqdisho kahor xil wareejinta FARMAAJO